Ra’iisal Wasaaraha DFKM Cabdi weli Gaas oo booqday Degmada Balcad
June 26, 2012 - Written by
Muqdisho:-Raa’isal Wasaaraha DFKM Cabdiweli Maxamed Gaas ayaa ka hadlay qabsashada Degmada Balcad ee gobalka Sh/Dhexe wuxuuna raisulwasaaraha Shirjaraa,id ku qabatay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya isaga oo isla galabtana booqday Degmada Balcad. Raisulwasaaraha DFKM Cabdiweli Maxamed Gaas ayaa sheegay in uu hambalyo u dirayo ciidamada DFKM iyo kuwa AMISOM ee saaka qabsaday Degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Cabdiweli Maxamed Cali Gaas in ayaa waxaa uu sheegay in ay dowladiisa sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto Ururka Al-Shabaab ;Gaas ayaa ka qeybgalay xaflad lagu maamuusayey Sanad guuradii 52 ee ka soo wareegtay markii ay horiyada qaateen gobalada Waqooyi . Sidoo kale waxaa ka hadlay qabsashada Degmada Balcad Taliyaha ciidamada xoogga ee DFKM Jen.C/qaadir Sheekh Cali Diini, waxaana uu sheegay in maanta ay tahay maalin taariikhi ah guusha ay gaareen Degmada Balcad.
Degmada Balcad ee gobalka Sh/Dhexe kama dhicin wax dagaal ah waxaana ka baxay ciidamadii Ururka Al Shabaab iyada oo qorsheynaya in ay wadaan dagaal dhuumaaleysi ah. Sheekh Yuusuf Ciise Kabakutukade Gudoomiyaha Sh/Dhexe ee Ururka Al-Shabaab ayaa caawa Shirjaraa,id qabtay waxaana uu wacad ku maray in ay dagaalka sii wadi doonaan ;Sheekh Yuusuf ayaa sidoo kale ka waramay dagaalka in uu yahay mid fog dheeraan doona marka u danbeysana la jabin doono ciidamada DFKM iyo kuwa AMISOM ee maanta ku duulay Degmada Balcad.